Ogaden News Agency (ONA) – Weerar Masjid Canada Ku Yaala Lagu Qaaday oo 6 Qof Ku Dhimatay.
Weerar Masjid Canada Ku Yaala Lagu Qaaday oo 6 Qof Ku Dhimatay.
Ugu yaraan saddex nin oo hubeysan ayaa weerar ku qaadey Masjid ku yaala gobolka Quebec ee Bariga Dalka Canada, abaarihii 20:00 fiidnimo ee Axaddii, xili lagu jirey salaadii Cishaha.
Wakhtiga weerarku dhacayey waxaa masjidka ku sugnaa oo ku cibaadeysanaayey 40 qof. Ugu yaraan 6 qof ayaa weerarka lagu diley waxaana ku dhaawacmey 8 qof sida ay Boolisku xaqiijiyeen. Warbaahinta gudaha ayaa muujineysa ciidamada Booliska iyo gawaadhida gar-gaarka oo gaadhey Masjidka Quebec City Islamic Cultural Center.
Guddoomiyaha Masjidka la weearay oo lagu magacaabo Mohamed Yangui ayaa warbaahinta la hadley waxaana uu is weydiiyey sababta keentey weerarkan cadownimada leh. Mohamed Yangui ayaan joogin Masjidka xiliga weerarku dhacayey, wuxuuse sheegay in markiiba Telefon lagula soo xidhiidhay.
Dhinaca kale Ra’iisul Wasaaraha dalka Canada ayaa tacsi u direy dhamaan kuwa waxyeeladu ka soo gaadhay weerarkan waxshinimada leh ee Masjidka Quebec City Islamic Cultural Center lagu qaadey.
Sida laga soo xiganayo Radio Canada waxaa weerarkan loo qabtey laba qof. Sidoo kale qof markhaanti ka ahaa sida wax u dhaceen ayaa Reuters u sheegay in kuwa weerarka soo qaadey ay ahaayeen saddex qof oo isticmaalayay qoryaha darandooriga u dhaca. Mamsjidka la weeraray ayaa sanadkii 2016 loo geystey fool xumeyn kadib markii albaabka Masjidka la dhigey madax khanziir oo sida hadiyad loo soo habeeyay ama loosoo galeeyay, falkaas oo Muslimiinta aad uga cadhaysiiyay.